Archive du 20181026
Vonona sy sahy Ravalomanana Aleo handeha ny fifidianana
Nitohy tany andrefan’ny Nosy ny fampielezan-kevitry ny kandida laharana faha-25 Marc Ravalomanana omaly 25 oktobra, dia tao Mahajanga, Marovoay, Ambatoboeny, Madirovalo, Mazomà, Bevilany ary Maevatanana.
Fikasana hanemotra fifidianana Fitadiavana hanaisotra fahefam-bahoaka, hoy ny AKFM
Nivoaka tamin’ny fahanginany tetsy amin’ny biraony etsy Andravoahangy ihany koa omaly ry zareo avy eo anivon’ny antoko politika AKFM, tarihin’ny filohany Eric Rakotomanga, manoloana ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny.
Sefom-pokontany atao olom-boafidy Efa ao anatin`ny lalàmpanorenana…
Tafiditra ao anatin`ny fotoam-pifidianana ny firenena amin`izao fotoana izao ary maro ny lesoka amin`ny fikarakarana azy. Miainga avy amin`ny fokontany ny fikarakarana fifidianana.
Kandida laharana faha 25 Mibosesika ny olona manampy azy
Voarain’ ny olona ny hafatry ny kandida laharana faha 25 , ankoatra ny fanohanana ara-bola efa mibosesika amin’ilay kaonty Tahiry ho fampandaniana an’i Marc Ravalomanana dia misy ihany koa ny fianakaviana tsara sitrapo izay nanolotra T shirt miisa 500 omaly.
Aza diso nimerao !
Aza disoina ny nimerao ry Jean a ! Izay aloha no tonga dia hafatro aminao mialoha ny hiarahabako anao.
Seces sampana Antananarivo Miantso fifampidinihana
Nanao fanambarana omaly ny avy eo anivon’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka eto Antananarivo na ny SECES Antananarivo.
Fanafihana ny biraon’ny zandary Andapa Olona 2 no maty, maro ireo naratra
Nokasain'ny andian-jatovo maromaro halaina an-keriny ny lehilahy iray ahiana ho nahafaty olona izay voatana nanaovana famotorana tao amin'ny borigadin’ny zandarimariam-pirenena Andapa .
Atao fitaovana politika ny resa-pako Nanazava ny tena marina ny kaominina
Eo anatrehan’ny fisian’ny olona manaratsy ny ben’ny tanànan’Antananarivo amin’ny resaka, izay atao fitaovana politika hanaratsiana an’i Marc Ravalomanana kandida filoha, dia nanamafy ny eo anivon’ny CUA tamin’ny alalan’ny Lefitra voalohan’ny ben’ny tanàna,
Disadisan’ny tontolon’ny fitantanana Rugby Mila vahaolana haingana hoy Maharitra Ali Petera
Nambaran’Atoa Maharitra Ali Petera filohan’ny fileovana rugby Hiza 17 hatramin’ny taona 2017, tamin’ny firesadresahana taminy teny amin’ny kianja Malacam Antanimena raha nanotrona ity ekipa
Mpikambana vaovaon’ny CEBB Lany ho filoha i Tiaraniaina Ndranto
Tontosa omaly tetsy amin’ny lapan’ny kolontsaina Mahamasina ny AGE sy ny fifidianana ny mpikambana vaovaon’ny CEBB « Comité des Entraîneurs de Basket-Ball» Malagasy. Ahitana mpikambana 15 ao anatin’ity rafitra ity ka toy izao avy ny toeran’izy ireo :
TONGA ANY TOAMASINA IREO RAZANA
Tonga omaly tao Toamasina ny razan’ireo insepktera telo izay matin’ny fitsaram-bahoaka tany Fenoarivo Atsinanana.
Fivangongoana eto an-drenivohitra Tsy hampandroso mihitsy ny toekarena
Marobe ny olona manorim-ponenana eto an-drenivohitra noho ny antony fitadiavana. Mahazo tombony kokoa mantsy ny olona tafapetraka eto amin’ny fitadiavana asa noho ny any ambanivohitra.
Asa fanandevozana vehivavy ny 70 %-n’ireo lasibatra
Mahatratra 150 tapitrisa ireo olona hiharan’ny asa fanandevozana sy ny tsy fanajana ny zon’olombelona maneran-tany raha araka ny fanazavana azo omaly tetsy amin’ny Carlton Anosy.
Boriborintany fahefatra Hiezaka hizara sakafo hatrany
Olona sahirana miisa 300 no nisitraka ny fanomezan-tsakafo maimaimpoana teny amin’ny fokontany Ankazotoho Anosimahavelona, izay nokarakarain’ny boriborintany fahefatra, ao amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA).